दिपाश्रीको बचाउमा बोल्दा नायिका प्रियंका कार्कीमाथि गालिको बर्षा |
दिपाश्रीको बचाउमा बोल्दा नायिका प्रियंका कार्कीमाथि गालिको बर्षा
२०७७, २८ असार आईतवार १६:१२ July 12, 2020 ताजा खबरमनोरन्जन
काठमाडौं । नेपाली फिल्म क्षेत्रमा अहिले विभिन्न विवादले चर्चा पाएको छ । कलाकारहरु एक पछि अर्को विवादित बन्दै गएका छन् । लकडाउनको समयमा घरमै फुर्सदिलो समय विताएका कलाकार सामाजिक सञ्जालमा गरिएका टिप्पणीका कारण विवादित हुने गरेका छन् ।
उनले लेखेकी छन्, चलिरहेको आदरणीय दिपा दिदीको बिवादले हामी सबैको ध्यान आकर्षण भएको छ। यसै सन्दर्भमा दुई शब्द राख्ने अनुमती माग्दछु। कसैको तर्क, भाव या बिचार आफुलाइ चित्त नबुझे आवाज उठाउने अधिकार तपाइ सबैमा सुरक्षित छ। चित्त नबुझेको कुरा राख्नुस, वहाँलाइ सकारात्मक ढंगले सच्चाउनुस।
हाम्रो आफन्त, आफ्नै छोरा-छोरीले केही गलती गरे, हामी के मुख छाडेर, मन परि अ’श्लील गाली गर्छौ र ? गर्दैन्नौ नि। एउटा अभिभावकको नजरबाट सम्झाउछौ, गलती औल्याउँदै अगाडी बड्ने हौसला दिन्छौ, माफी मागे स्वीकारछौ। यहि तरिका हाम्रा देशका छोरी चेलीको लागि पनि अपनाउन पाए कति राम्रो हुन्थ्यो नि। होइन र ? आखिरमा हामी सबै मानिस हौ। हाम्रो मानसिक स्वास्थ पनि प्रभावित हुन्छ, होइन र ? यो बिषयमा ध्यान पुराइदिनुस, विनम्र अनुरोध। धेरै माया। प्रियंका कार्की यसैबिच उक्त स्टाटसपछि कमेन्ट बक्समा प्रियंका कार्कीको चर्को आलोचना भईरहेको छ।